Sina mankany Turkmenistan-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Firenena ao Azia Afovoany>Sina mankany Turkmenistan
Fandefasana entana avy any Chine mankany Turkménistan
Raha mitady mpandefa mpitatitra entana azo antoka ianao hanampy ny fandefasana anao any Shina mankany Turkménistan, eo amin'ny toerana mety ianao.
Na ny serivisy fandefasana entana aza avy any Shina mankany Turkménistan dia efa matotra tokoa ankehitriny, ny SHL dia afaka manandrana manao tsara kokoa ny asa lojika, ankoatry ny vahaolana tsara indrindra sy ny serivisy tsara, afaka manome tahan'ny fifaninanana avy any Shina ka hatrany Turkménistan ihany koa izahay.
Ny SHL dia hanampy anao hisafidy ny làlana fandefasana entana tsara indrindra, ny vidin'ny fandefasana fifaninanana ary ny orinasan-tsambo tsara indrindra hanampy anao amin'ny fanafarana entana avy any Shina mankany Turkménistan.
China Europe Road Transport avy any Shina mankany Turkménistan
China Railway Express avy any Shina mankany Turkménistan
SHL dia manome serivisy fitaterana an-dalamby miorina eo amin'i Sina sy Turkménistan ho an'ny entana fandefasana FCL sy LCL, lozisialy tetikady One Belt sy One Road ho an'ny fanafarana sy ny fanondranana vahaolana natokana ho azy ary afaka mamaha ny olana amin'ny fahazoan-dàlana ao Shina izahay.
Fitaterana an-dalamby enta-mavesatra avy any Chine mankany Turkménistan
SHL dia afaka manome ho an'ny Cover Truck крытый вагон Open Wagon полувагонах вагон Flatbed Truck платфрму вагон, fitaovana marim-pototra, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Shina mankany Turkménistan Afaka manome vahaolana hijanonana sy mifanaraka tsara izahay.
Fandefasana Ro-Ro / Break Bulk avy any Shina mankany Turkménistan
SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Shina ka hatrany Turkmenistan Afaka manome vahaolana hijanonana sy mifanaraka amin'ny laoniny izahay.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Shina mankany Turkménistan
SHL dia manana entana marobe fandefasana entana avy any Shina mankany Felixstowe, Southampton, sns. Mba hahafahanay mitondra hatrany ny fitaterana an-dranomasina tsara mankany amin'ny seranan'i Turkménistan avy amin'ny mpitatitra marobe, ary afaka miantoka ny habaky ny kaontenera isika na dia amin'ny vanim-potoana fara tampony aza.
Fandefasana entina fiaramanidina avy any Shina mankany Turkménistan
Betsaka ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Turkménistan ary misy ihany koa ny entana fandefasana entana avy any Shina ka hatrany Turkménistan amin'ny alàlan'ny rivotra, SHL dia afaka manome zotram-piaramanidina tena mifaninana izay ambany noho ny tsena ho an'ny mpanjifanay mifototra amin'ny fandaharam-potoananao.
Sahabo ho 7,775 km miala an'i Turkménistan i Sina fa ny mandalo an'io halaviran-dalana io dia mety maharitra kokoa noho ny làlan-dranomasina faritan'ny rano.
Alohan'ny hisafidianany ity fomba fandefasana entana ity dia tokony ho fantany tsara ny seranan-tsambo samy hafa any Shina sy Kazakhstan.
Fanamarihana: Tokony halefa any amin'ny seranan-dranomasina mora alefanao ny entanao ka ahafahanao misosa mora foana avy any Chine mankany Kazakhstan
Seranam-piaramanidina lehibe any Turkménistan
Seranam-piaramanidina Ashgabat Seranam-piaramanidina Turkmenbashi
Seranam-piaramanidina Turkmenabat Seranam-piaramanidina Mary
Seranam-piaramanidina Cheleken Atsinanana
Seranam-piaramanidina Dzhebel Air Base
Seranam-piaramanidina Ashgabat Bezmein
Seranam-piaramanidina Mary North
Seranam-piaramanidina Saraghs atsimo atsinanana
Seranam-piaramanidina Gyaurs Airfield
Fomba fandefasana entana avy any Chine mankany Turkménistan
Isaky ny manafatra avy any Shina mankany Turkménistan ianao, dia afaka misafidy fomba fandefasana maro.
Seranana iza no tokony halefa any Shina mankany Turkménistan?
Satria mila seranana afaka mampifandray anao mivantana amin'i Turkménistan ianao
Adiny firy ny fotoana nandefasana an'i Shina ho any Turkménistan?
Raha fintinina, azonao atao ny manondro ireo rehetra ireo mba hahazoana ny fotoana rehetra handefasana azy ireo avy any Shina mankany Turkménistan
Ny mpampita entana toy izany dia mahalala ny lalàna sy lalàna mifehy ny fanafarana avy any Shina mankany Turkménistan